Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 04/02/2020)
Chimwe chinhu iwe varege kuona, ndechokuti doro rakanaka Route nechitima inogona kuwanika zhinji chitima dzemapurisa. The Sheffield Tap mumwe yakanakisisa, uine pamusoro 30 casks uye drafts - zvimwe anoratidza pazviridzwa kubva omunharaunda uye nekaupenyu kujeka doro. Unogona kuwana muchitima uende kushanyira vamwe vavo ... kana kungogara kuisa uye kupedza nguva yakawanda zvakabudiswa pavo. How tonhorera?!
bhaa zita The rinobva doro sokumborasika pfungwa uye kubvunda, whose pink elephant symbol also decorates the cafe entrance.
Pechiteshi chechitima chiri 10 miniti vanofamba kubva Datenroku, saka hazvishamisi chiri pamusoro Beer Route nechitima – Best Beers mu Europe.
Pokugadzwa iri parizvino anazvo ne Sam Smith Old Brewery. Pubs dzavo ndiwo vanoenda kuti ezvivako, chinyakare ales uye unodziya omukati. Hapana pezvitsiga makuru, chete penya zvipiriso kubva yavo bhurure muna Tadcaster, Yorkshire.
Kunyange bhurure yave modernized kubva 1993, makiromita kwegura wedzimba dzakasara pachivande Chikamu rwokuparidza. A subterranean Ramble rinoguma pachena emapuranga inovirisa uye vaviri hombe yemapuranga emiti yacho mhando zvaishandiswa Zera zvose rinonzi pilsner Urquell.
tinogona kurega here pane pakavanda? The yakanakisisa doro mu Germany ndiyo kwete mu Munich. Germany ane isingaverengeki vakasiyana-siyana aakatipa beers. Kunyange vakawanda nyika brews ose vari zvinoshamisa zvakanaka. Asi kwete doro ose anogona kuva chakanakisisa, kunyange munyika umo doro iri ngano. Kana uri kutsvaka-siyana uye unoda doro wako nemaitiro uye sizzle, kuita pachako nyasha uye kuronga kushanyira kune Bavarian musana nyika, apo doro ndiyo chikamu mutsika uye brewed nevanhu chaivo vane nyaya kuudza.
Makumi manomwe chidiki- uye pakati kukura doro kushanda muchikamu ichi Bavaria. Vamwe vavo ndeyemunguva 1400s. Gumi vakanga kana anosimbisa kereke, chomurume dzemamongi kana vaiva ne kwamachinda. Three dzichiri kushanda ne NaAmai Pauline Kabanzi German uye ndiye dangwe Abbey bhurure munyika. dzikisa Bavaria ndiyo pfuma yakavanzwa kana totaura doro.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-beers-route-europe/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)